Akhriso Qisada”Ciyaaryahan Kooxdiisu Tacsi U Samaysay Geeridiisa Oo Telefishan Ka Daawanayay Isla Ciyaarta Lagu Xusayay Geeridiisa | Berberatoday.com
Akhriso Qisada”Ciyaaryahan Kooxdiisu Tacsi U Samaysay Geeridiisa Oo Telefishan Ka Daawanayay Isla Ciyaarta Lagu Xusayay Geeridiisa
Ireland(Berberatoday.com)-Fernando LaFuente ayaa sheegay inuu daawanayay tacsidiisa ka dib markii koox uu hore ugu ciyaari jiray ay soo tabisay geeridiisa. Taasi oo markii uu baraha bulshada ku faafiyay sida arrinkaasi u dhacay xiiso weyn abuurtay oo baraha Bulshada ee Internetka aad la isugu waydaarsaday.
Markii ay kooxdii uu u ciyaari jiray oo lagu magacaabo Ballybrack FC u sheegeen xidhiidhka kubadda cagta ee gobolka Leinster oo ka tirsan dalka Ireland in xiddigoodii LaFuente uu ku geeriyooday shil gaadhi, mid ka mid ah ciyaarihii loo qorsheeyay ayaa dib loo dhigay kuwo kalena waxaa la amray in daqiiqad aamusnaan ah laga horumariyo, si loo xuso geerida ciyaartooygan oo ay ku sheegeen mid ay aad u jeclaayeen markii uu kooxdooda ka mid ahaa sidaa darteed ay ku maamuuseen in ay qaabkaasi u xusaan geeridiisa.
Laakiin waxa lama filaan noqotay in aanu isagu ahaynba nin dhintay sida ay u qaateen waliba xataa aanu ahayn nin dhaawac ka soo gaadhay iskaba daa geeriye. Kooxda ayaa raalli galin ka bixisay arrintan markii ay ogaatay in ninkii ay tacsidiisa xusayeen uu nool yahay, xidhiidhka kubadda cagta ee gobolkaasina waxay billaabeen baadhitaan ku saabsan sida arrinkaasi u dhacay.
“Howshu waxay ka billaabatay in la ii soo diro dhammaan wararka ku saabsan arrintan – sidaas ayaanan ku ogaaday inaan dhintay”, ayuu yidhi LaFuente, mar uu la hadlayay idaacadda RTE.
LaFuente oo dhawaan ka tagay kooxda Ballybrack, una wareegay kooxda Galway ee isla dalkaasi Ireland ayaa sheegay in usbuucii la soo dhaafay ay la soo xidhiidhay kooxdiisii hore, iyaga oo ku wargaliyey in mar dhow uu maqli doono war ku saabsan inuu shil galay, maadaama ay sheegeen in aanay ku faraxsaneyn inuu ka tago kooxdaasi.
Isagoo hadalkiisa sii wata ayuu intaas ku daray “waan ogaa iney jiri doonaan sheekooyin noocaas ah oo aniga igu saabsan laakiin waxaan u maleynayay iney noqonayaan anigoo lugta ka jabay ama wax la mid ah. “Shalay anigoo guriga jooga oo soo dhammeystay shaqadeyda, xilli aan ku ciyaarayay internet-ka ayey igu dheheen: ‘waxaad noqotay qof caan ah’. “Waxba kama soo qaadin, waayo waxay ila ahayd inay yidhaahdeen lugta ayuu ka jabay, wax wal wal ah ima soo food saarin sababtoo ah kooxdooda uma sii ciyaareynin dhibna uma arkeynin. Waa been qof walba ayaana iska sheega”.
Laakiin LaFunte sida uu moodayay ma ahayn, waxaana mar qudha la shaaciyay inuu dhintay.
Intii uu wareysiga bixinayay ayuu yidhi: “In kastoo ay xanuun badantahay in qof 20 jir ah oo mustaqbal wanaagsan leh uu geeriyoodo, haddana tani waxay ahayd wax lagu qoslo, sababtoo ah aniga ayaaba daawanayay tacsideyda”.
Ciyaar ay kooxda Ballybrack la yeelan lahaayeen kooxda kale ee Arklow ayaa la baajiyay ka dib markii ay warkaas shaaciyeen, xidhiidhka kubadda cagta ayaana wargeysyada maxalliga ah ku ku faafiyay geerida ciyaartogaas, iyagoo tacsi u dirayay ehaladiisa iyo asxaabtiisa. Arrinkaasi oo naxdin badan dhaliyey maadaama uu shacbiyad badan xiddigan da’da yari ku lahaa kubadda cagta Ireland ahaana xiddig da’ yar oo soo koraya taasina ay naxdinta geeridiisa ay ka naxeen sii laban laabtay.
Guddoomiyaha xidhiidhka kubadda cagta David Moran ayaa idaacadda RTE u sheegay in xoghayihii kooxda uu xilka iska casilay maalintii Salaadada ahayd. Baadhitaannada ay sameynayaan xidhiidhka kubadda cagta ee gobolka ayaa lagu ogaan doonaa waxa ku kallifay kooxdaasi inay warka been abuurka ah faafiso. Waxa arrinkan sidoo kale aad uga xumaaday waalidiinta dhalay laacibkan.